Tababare Jose Mourinho oo sheegay in mid ka mid ah Weeraryahannadiisa uu heshiis cusub dhowaan qalinka ugu duugi doono Tottenham – Gool FM
(Yurub) 25 Okt 2020. Tababaraha kooxda Tottenham Hotspur ee Jose Mourinho ayaa qiray in Son Heung-min uu ku dhow yahay inuu heshiis cusub oo waqti dheer ah qalinka ugu duugo kooxda.
28-sano jirkaan ayaa si xoog leh kula bilowday Spurs xilli ciyaareedkan 2020-21, wuxuuna dhaliyey sagaal gool, isagoo caawiyey afar gool oo kale siddeed kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in laacibka u dhashay Kuuriyada Koonfureed lagu wado in loo soo bandhigo qandaraas cusub oo shan sano ah oo uu ku sii joogayo garoonka kooxda Tottenham Hotspur, kaasoo uu ku qaadan doono adduun dhan 200,000 oo gini toddobaadkii.
Macallin Mourinho ayaa sheegay in aysan jirin wax dhaqsi ah oo lagu deg dego oo looga saxiixo weeraryahanka heshiis cusub, laakiin tababaraha reer Portugal ayaa kalsooni ku qaba in heshiiska dhowaan la gaari doono.
“Waan jeclaan lahaa [inuu saxiixo qandaraas cusub]. Son wuxuu haystaa saddex sano oo qandaraas ah, marka ma’ahan inaan ku jirno xaalad aad u daran oo qof walba uu walwal qabo. waxaan rumeysanahay inuu mustaqbalkiisa u hibeyn doono kooxda waqti dheer” ayuu Jose Mourinho u sheegay Evening Standard.
“Qof walba oo kooxda ka tirsan gabi ahaanba waa jecel yahay ciyaaryahanka iyo wiilkan, waxaana uu isku dayayaa inuu sidoo kale dareemo inuu ka mid yahay alaabta guriga, waa wax iska caadi ah in kooxda ay isku dayaan inay ka saxiixdaan saddex sano ilaa afar ama shan ama lix, ma garanayo, waa iska caadi.” ayuu Mo ku daray hadalkiisa.
Son ayaa dhaliyey todoba gool shan kulan oo uu saftay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.